Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ugbochi China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Electric,Mgbagwoju anya na-ekpo ọkụ,Mgbacha na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweghị atụ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe Mgbochi Na-ekpocha Ala > Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ugbochi
Ihe mgbochi igwe eletrik anyị na-ewetara gị ahụmahụ ịme ahụ na-acha ọcha. Site na ngbanwe nke dị nfe, enyo malitere ikpo ọkụ. Ala ala dị ala anaghị egbu anụ ma ọ bụ mmebi mmebi. Mee ka okpomọkụ maka igwe gị na-adịgide adịgide ma nye gị anya.
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-ahụ maka ịmepụta ihe ọkụkụ ihe karịrị afọ 20, anyị nwere ezi mma na ọnụahịa kacha mma.
Ihe gbasara gburugburu ebe obibi maka enyo enyo
Mkpụrụ akwụkwọ carbon crystal na radiation infrared
Akwa mma, Nchekwa ike na ogologo ndụ nke 30000 awa
Mee ka enyo ahụ doo anya, dị mma maka ngwa etemeete
IP44 rating, kwesịrị ekwesị iji na nkwari akụ ụlọ ịwụ ahụ
Mfe nfe, ma dị mfe maka nchekwa
UL CE RoHS ka akwadoro ya
Ọnụ nke degragger mirror ada nwere ike ịbụ omenala.
USB na-akwado aka ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Onyinye Nkwalite na Aka Aka Na-agbapụta Aka Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo na-ekpo ọkụ maka Nlekọta Mgbasa ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Electric Mgbagwoju anya na-ekpo ọkụ Mgbacha na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweghị atụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Electric Toilet Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ejiri Igwe Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Carbon Igwe Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu